We She Me: သြော်ဇီက ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ
မဇနိ - 8/26/08, 3:30 PM
ဗဟုသုတရတဲ့ အဖိုးတန်ပို့စ်လေး ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုအန်ဒီ။
Wai Myo - 8/26/08, 4:03 PM
MrDBA - 8/26/08, 5:55 PM
ကျေးဇူး ကိုအန်ဒီရေ မေးချင်နေတာ ကြာပြီ။
warwarkhaingmin - 8/26/08, 9:00 PM
Thank u so much for ur post. :D
May Moe - 8/27/08, 12:30 AM
ဗဟုသုတတွေ ကို မချွင်းမချန် ပြောပြပေး တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ :D
ပီတိ - 8/27/08, 1:36 AM
ကိုအန်ဒီ အဲဒီလို အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားပြီးရေးလို့ wesheme ကိုအမြဲရောက်ဖြစ်တာပေါ့..
khin oo may - 8/27/08, 1:43 AM
No money and so many bills.
khin oo may - 8/27/08, 2:17 AM
တို.အတွက် ကတော. No money and so many bills.
(တို.ပထမရေးထားပြီး ဆင်ဆာဖြတ်ပြီး comment ပေးလိုက်တာ ပီတိနဲ. အတွေးချင်းတူသွားလို. ပြန်တင်လိုက်တယ်.)
Anonymous - 8/27/08, 5:09 AM
Anonymous - 8/27/08, 10:36 AM
Super is 9%.
Andy Myint - 8/27/08, 1:13 PM
အားပေးတာ ၀မ်းသာ မဆုံးပါ စာဖတ်သူ အပေါင်း။ ပြင်ပေးတဲ့ စာဖတ်သူ တစ်ဦးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
Anonymous - 8/27/08, 2:14 PM
Waiting for your Ausi's experience post.
Dr Khaing Myo - 8/27/08, 10:01 PM
ချီးကျူးတယ်ဗျို့.. ဒီလိုပွင့်လင်းတာကို.. ကောင်းလိုက်တာ..
စိုးထက် - Soe Htet ! - 8/28/08, 8:20 AM
:) Many thanks :P
Andy Myint - 8/28/08, 8:47 AM
ကြွားတယ် မထင်ရင် ကျေနပ်ပါပြီ ဒေါက်တာ
ကိုစိုးထက်ကြီး မဒမ်ကို စာရင်းပြန်တင်ရင် သြော်ဇီမှာ ဈေးကြီးကြောင်း သက်သေရလို့ ကျေးဇူးတင်တာလား.. ဟီးဟီး … ခင်တတ်လို့ နောက်တာပါ။
Anonymous - 8/28/08, 10:21 PM
အပျိုကြီးဆိုရင်ကော အော်ဇီမှာ အိမ်ဝယ်လို့ရလား?
စင်ကာပူမှာကတော့ အိမ်လေးဝယ်ခွင့်ရဘို့ အရေး
ယူဆဂိ - 8/29/08, 2:10 AM
Andy Myint - 8/29/08, 9:46 AM
ဒီမှာက အစိုးရဆီက ၀ယ်တာ မဟုတ်တော့ မိသားစုမှာ ဘယ်နှယောက်ဖြစ်မှ ၀ယ်လို့ ရတယ် ဆိုတာ မရှိလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အများကြီး မသိပါဘူး။ ကြားဖူးသလောက်တော့ မရှိပါဘူး။ စင်္ကာပူမှာလည်း Free Hold ဆိုရင် ၀ယ်သူ တစ်ယောက်တည်းလည်း ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
slt - 8/30/08, 11:28 PM
slt - 8/30/08, 11:32 PM
Hi,brother just 1 question here, I heard in SG people can own their flat for 99 or 999(mostly 99) years. Is there same rule in AU.
Andy Myint - 8/31/08, 12:13 AM
It's not that I know of, bro..
Anonymous - 8/31/08, 9:28 PM
How do you calculate the AUD equivalent of SGD salary portion? Is it on Gross salary (eg. before CPF deduction) or net amount? Does Australian govt. has savings or retirement scheme for PRs like in SG?
Andy Myint - 8/31/08, 10:15 PM
These salaries are as seen in job advertises in SG and AU for the same skill set.
Anonymous - 9/1/08, 3:19 AM
ဒါနဲ့ ကိုအန်ဒီ...တစ်ကယ်လို့ သြော်ဇီ ကို ခဏလာလည်ရင်းနဲ့ အလုပ်ရှာရင် ရော အိုကေနိုင်လား....ဆိုလိုတာက အဲဒီမှာ ခဏလာလည်ရင်းနဲ့ အလုပ်ရှာတဲ့ သူတွေ ကို အလုပ်ခန့်လေ့ခန့်ထ ရှိလားလို့ ပါ(Eg..like SG)...အဲဒီမှာ stay က ၆လ လောက်ရမယ်ဆိုတော့... သိပ်ပြီးလောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့... Thanks :)
Andy Myint - 9/1/08, 10:14 PM
ဒီ အပိုင်းတော့ ကျွန်တော် အသေအချာ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ ပြောပါရစေ **မှားနိုင်ပါတယ်** ။ အလုပ်ကြော်ငြာမှာ PR ဖြစ်ရမယ် ရေးလေ့ မရှိဘဲ ဒီမှာ ရှိရမယ် လောက်ပဲ ရေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ *ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ* အဲဒီလိုမျိုး အလုပ်ဗီဇာနဲ့ သိပ်မတွေ့ဖူးပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီက အလုပ်ရှင်တွေက ရှေးရိုးသမားတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက စင်္ကာပူက အလုပ်ရှင်တွေလို (ဥပမာ ပြောတာပါ) လုပ်ခ သက်သာအောင်တို့ ဘာတို့ အတွက် တခြားနိုင်ငံက လူတွေ ခန့်မယ်မျိုး ရှုပ်ရှုပ် ရှက်ရှက် သိပ်မစဉ်းစားချင်တဲ့ ပုံပဲ။ ပြီးတော့ ဒီက Bureaucratic ဖြစ်တယ်။ ပါမစ်ရဖို့ ဘာစာရွယ် ညာစာရွက် လိုတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ Web Site တွေမှာ သူတို့ Policy ကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရေးထားတဲ့ အတွက် ဘာတွေ လိုအပ်တယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ် ကြော်ငြာ Web Site တွေမှာပါ ကြည့်ပြီး Agent တွေကို ဖုန်းဆက် မေးကြည့်ရင်တော့ သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်လား ဆိုတာကို သိနိုင်မယ် ထင်တယ်။ အထက်မှာ ပြောသွားတာတွေ မှားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အထင်ကို ပြောတာပါ။
Anonymous - 9/3/08, 5:50 AM
ဘ၀င်...စောက်ပေါ....fuck you Aussie salary...
Andy Myint - 9/3/08, 9:13 AM
ကိုယ့် သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် တစ်ယောက်ကလည်း ကိုယ်ဘလော့ ဖတ်ပြီး “ဘ၀င်”၊ “ငကြွား” လို့ ပြောဖူးတော့ ခင်ဗျား ပြောတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆဲတာတော့ ရိုင်းလွန်းတယ်။ ခင်ဗျားလည်း ယူကေမှာ “ပေါင်” ၀င်နေတာပဲ။ ယူကေက သြော်ဇီထက် အဘက်ဘက် သာပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အေးဆေးနေပါ။
Anonymous - 9/13/08, 6:57 PM
ကိုအန်ဒီခုလိုဗဟုသုတရအောင် ရေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အမေရိကအတွေ့အကြုံတွေပါရေးပေးပါ။ နောက်ပြီး သြော်ဇီမှာ စင်္ကာပူလို အပျို၊ လူပျို မြန်မာများအခန်းစုဌားနေကြတာလား? တကိုယ်တည်းသမားများအတွက် အခန်းဘယ်လိုဌားနေရင် ပိုသင့်လျော်ပါသလဲ? ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လဲဖြေကြားပေးပါ။ :)
Andy Myint - 9/15/08, 5:02 PM
စိတ်မပူနဲ့ စာဖတ်သူရေ မြန်မာတွေ ရှိရင် ဒီလို စုနေ စုငှားတာတွေ ကတော့ ရှိမှာပဲ။ ကျွန်တော့် အသိ တချို့လည်း စုနေကြတယ် ကြားတယ်။ စင်္ကာပူမှာလိုတော့ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျောင်းသား အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မေးရင်တော့ သေချာပေါက် သိနိုင်တယ်။
Anonymous - 9/17/08, 9:08 PM
IT Software field ကပါ။
ရန်ကုန်မှာ လုပ်သက် ၅ နှစ်။
စင်ကာပူမှာ ၂ နှစ် နှင့် လက်ရှိ။
ဘွဲ့က အဝေးသင် ရိုးရိုးဘွဲ့။
YTU က နည်းပညာဒီပလိုမာတစ်ခု။
Microsoft က certificates တွေနဲ့ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေသူပါ။
အဲ့ဒါ အော်ဇီ အိပ်မက် - မက်ခွင့် ရှိ/မရှိ။
စင်ကာပူကနေ ပြောင်းချင်လို့ပါ။ ဒီက အရိုင်းအစိုင်း ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကို စိတ်ကုန်လွန်းလို့ပါ။
ပြီးတော့ ကျနော့် professional နဲ့ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်။
Andy Myint - 9/18/08, 8:55 PM
စင်္ကာပူကလည်း ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ် စာဖတ်သူရယ်။ လုပ်သက်များရင်တော့ အခြေအနေ ကောင်းပါတယ်။ http://www.acs.org.au/ မှာ Assess လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီး သူတို့ ပေးတဲ့ Class က အမှတ် ဘယ်လောက်ရလဲ ကြည့်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ ဒီအတွက် စင်္ကာပူ ၅၀၀ လောက်ပဲ ကုန်မှာပါ။ ပြီးရင် ဆက် စဉ်းစားလို့ ရတာပေါ့။
ကိုဇေယျာ - 9/23/08, 5:58 AM
ခုမှ ၀င်ငွေထွက်ငွေကို စာရင်းဇယားနဲ့ သေခြာစလုပ်ဖို့ သတိရသွားဘီ။ တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို။
ကျနော်လဲ တစ်နေ့ Au ကိုရောက်အောင်လာပါဦးမယ်။ ခုတော့ SG မှာပဲ ပျော်မွေ့လိုက်ပါဦးမယ်။
Anonymous - 9/24/08, 3:27 AM
Thanks for this post. I am also planning to move to aus from sg
Andy Myint - 9/25/08, 10:19 PM
ပုံမှန်ဆို မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး ကိုဇေယျာ... ဒါက ဘလောက်မှာမို့ပါ ဟီးဟီး။
Thanks, Reader. Welcome to Australia. :)
Anonymous - 10/14/08, 4:05 AM
Thurein - 1/25/09, 5:19 AM
It is really nice of you to share what you have got.
I seldom see this kind of benevolent sharing before.
I'masoftware developer working in Singapore.
Anonymous - 2/12/09, 2:00 PM
A lot of idea we got it
If we come to australia, which part is suitable for our,
Which is easy to get PR?
If I am not wrong,some part of Australia is not good for our, is it correct?
Anonymous - 3/1/09, 3:48 PM
Harrrrr....It was more full details that I have expected. Thanks for whatever you posted. All facts and data are very useful. I'm working as Costing Engineer in Oil and Gas field especially for piping and structures fabrication and erections. I'm wondering those kinds of fields are there or not. If you have time, let me know the situations in those business. I was also graduated from NUS (MSC eng:). Is it possible to migrateabit more easily?
Anonymous - 3/3/09, 3:42 AM
Thanks for the useful posts. Please just forget about the negative comments. Your time is not wasted and we do appreciated it. It is quite handy for us to have insight knowledge.
BTW it would be useful if we can know the welfare package to the kids support by the state. I also heard that the education in Australia is to rely on private education rather than public. What do you think about that? Thanks.
Anonymous - 12/31/09, 1:47 PM
ကျေးဇူးပါ ကို အန်ဒီ၊၊
တောင်ပေါ်သား - 2/3/10, 12:55 PM
ကျေးဇူး အကိုရေ ကျနော်ကတော့ အိပ်မက် မက်နေတယ် လာဖို့ ကြိုးစားဦးမယ်း)
Anonymous - 3/6/10, 5:11 PM
Anonymous - 7/26/10, 8:55 PM
Based on my study on the comparison of salaries between SG & Au, the facts and figures are quite tally with you. Let me ask one thing for your opinion. If someone getting 5k/month in SG with 12 years experience (with SOL occupation),can he get the same salary in Au (According to your formula above, it should be 90K/annum nett after tax)?
Theorectically, ...Yes but practically?????
Andy Myint - 7/26/10, 9:49 PM
For IT jobs, this is just right. I have no idea with other professions. 90K p.a. net (130K pa) is not impossible thing for the one you mentioned (if it is in IT). Chance could be slim in the first job though. 75K p.a. net (100K p.a) is very likely and common in IT for senior roles.
Anonymous - 7/27/10, 2:10 AM
I'm in Civil Engineering field and holding Subclass 136 visa since two years ago. You are right. Chance is slim to get same level at first job. There will bealittle bit of pain at the beginning of migration. I just haven't prepared to accept it.
Anyway, it's good to know your view as well.
Anonymous - 11/25/10, 7:04 PM
hi Ko Andy, I manew reader of ur blog. But i like ur posts very much coz they give me lots of knowledge. I also want to know abt US n Canada. I appreciate ur time.
Zin War Win - 12/8/10, 1:31 AM
ကိုအန်ဒီရေးတဲ့ Post တွေက ကျွန်မမေးချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတွေချည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
Anonymous - 2/6/11, 3:44 PM
Your so great thanks for your post.
Anonymous - 3/31/11, 11:16 PM
Andy How is text return?
Anonymous - 4/10/11, 2:42 AM
Thank you Ko Andy !!
အင်ကြင်းသန့် - 10/24/11, 5:00 PM
ဒီပိုစ့်အတွက်ရော အော်ဇီနဲ့ပတ်သက်သမျှ တစ်ခြားပိုစ့်တွေ အကုန်လုံးအတွက်ရော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်....
ကိုအန်ဒီတို့ တစ်မိသားစုလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ...:)